HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Mandeha amin'ny kamiao mandritra ny taom-piasana ny fiaran-dalamby herinaratra nasionaly
09 / 01 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, Headline, TORKIA
Nanamafy ny minisitra Turhan fa hatramin'ny andro voalohany amin'ny maha-governemanta, ny fotodrafitrasa fitaterana no antony voalohany hanatsarana sy hanovana ny fivelomana rehetra, tao amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mitondra ny lohateny hoe Mesafe Distance sy ny tarika voarakotra ao anatin'ny 17 Taona ao amin'ny Railway ünde nokarakarain'ny TCDD General Directorate.
Turhan dia nilaza fa ny olombelona dia niditra tamin'ny fifandraisana vaovao, ara-toekarena, sosialy ary kolontsaina miaraka amin'ny fampandrosoana rehetra amin'ny fitaterana manomboka amin'ny famoronana ny kodiarana ka hatramin'ny fahitana ny valala, avy amin'ny famokarana fiara voalohany mankany amin'ny teknolojia fiaramanidina. Turhan dia nahatadidy fa ny lalamby 1856 1923 kilometatra, izay naorina nanomboka ny taona 4 ka hatramin'ny 136, dia nolovan'ny Repoblika, ary ny fiaran-dalamby dia nihena taorian'ny taona 1950.
Lalamby ny 2003 fanjakana politika ho nitondra zavatra sy Torkia Turhan nanazava fa efa ampiharina misesy tetikasa dia hifindra ho any amin'ny ho avy, "isika eo amin'ny andraikiny nandritra ny 17 taona, no vola mihoatra ny 767,5 tapitrisa kilao eo amin'ny fitaterana sy ny fidirana foto-drafitrasa." Hoy izy hoe.
Turhan dia nanamafy fa hanohy mampiasa vola amin'ny lalamby mifanaraka amin'ireo lasibatra 2023 izy ary nilaza hoe: ız Ho tonga amin'ny lalamby 5 kilometatra izahay amin'ny famitana ny tsipika vaovao 509 17 kilometatra. Hanohy handroso amim-pahatokiana ny ho avy isika ..
Torkia, tamin'ny taona 2009, nanokatra ny fanompoana ao an-Ankara-Eskişehir mifanaraka ny haingam-pandeha fiaran-dalamby (YHT) hitsena milaza, fifadian-kanina sy maoderina Travel asa 7 Turhan milaza izy ireo hahatratra 40 isan-jato ny faritany sy ny firenena ny mponina, ka hatramin'izao ny YHT 53,1 tapitrisa mpandeha Fampahalalana momba ny dia.
Y Afaka nahatratra ny fiaran-dalamby tsy hita niaraka tamin'ny YHT Y izahay
Turhan, olom-pirenena tao anatin'ny 60 taona lasa, "tsy nahita ny fiaran-dalamby" dia nilaza i YHT fa nanome izy ireo, "Ny lalamby anay, ireo taona voalohan'ny Repoblika dia nanomboka miaina toy ny taona volamena."
Nohavaozina ny lalamby rehetra nandritra ny taonjato maro, na ny sonia sy ny herinaratra nanamarika an'i Turhan, nampitombo ny halavany 2003 2 kilometatra, izay 505 isan-jaton'ny andalana famantarana dia nitombo ny 23 isan-jaton'ny 155 6 kilometatra, hoy ny fitohizan'ny asa izay naharitra 382 2 kilometatra. .
Minisitry ny Turhan, 2003 kilometatra tamin'ny 2, izay 82 isan-jaton'ny halavan'ny herinaratra dia nitombo 19 isan-jato ho 176 5 kilometatra hahatratrarana, 753 kilometatra ny asa efa natao, hoy izy. Turhan, 785 kilometatra ny halaviran'ny lalamby haingam-pandeha ambony Ankara-Sivas nikendry ny hamita ny ampahefatry ny tamin'ity taona ity, hoy izy.
"Hamafisintsika ny fifaninana ataon'ny mpandraharaha"
Turhan dia naminavina fa mikendry ny hahatratra 2023 isan-jaton'ny isan-jiro elektrika sy fehezanteny amin'ny taona 77, dık Nanomboka nanolotra ny indostrialy izahay hanana ivon-java-lalana, làlana, lalamby ary fitrandrahana an-dranomasina ary fitrandrahana mitambatra.
Turhan dia nanambara fa rehefa vita ny foiben'ny logistika 25 dia vitan'izy ireo ny 72,6 tapitrisa metatra toradroa misy boaty fitahirizana entana ary fitantanana faritra 4,1 tapitrisa taonina ary trano fitaterana TEU fanampiny 16,2 tapitrisa. Ny ivontoerana lozika lozika Mersin (Yenice) sy Konya (Kayacık) dia hosokafana amin'ity taona ity. ”
Turhan dia nanasongadina fa ny Kars sy Izmir Kemalpasa foibe lozisialy dia manohy ny asa fananganana ary ny foibem-pianarana lozika efa vita tamin'ny Sivas dia hanomboka ny asa fanorenana amin'ity taona ity.
Nolazain'i Turhan fa hampiditra hery amin'ny fifaninanana ireo mpandraharaha amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo zotra indostrialy voalamina, izay antsoin'izy ireo seranan-tsambo mainty, miaraka amin'ny tambazotra vy.
Amin'ny ho avy, ny OSB 38, ny faritra indostrialy tsy miankina, seranan-tsambo ary zoro maimaimpoana sy trano famokarana 36 mandritra ny 294 kilometatra misy zotra mampitohy dia hamindra an'i Turhan bebe kokoa, "Ho an'ny fitaterana entana haingana kokoa sy ara-toekarena, dia manao serivisy mankany amin'ny seranana izahay."
Turhan, seranana 10 sy piara 4, misy fifandraisana 85 kilometatra amin'ny lalamby, maneho Filyos, Çandarlı, ary koa seranan-tsambo 7, anisan'izany ny seranan-tsambo lehibe izay hanao serivisy lalamby.
"Mitondra ny EMU nasionaly izahay amin'ity taona ity"
Turhan dia nanambara ihany koa fa ny KARDEMİR AŞ dia nanomboka ny famokarana lalamby haingam-pandeha avo lenta amin'ny fenitra iraisam-pirenena ho ao an-trano.I Turhan dia nanome fampahalalana fa nampiasa lalamby 770 arivo taonina miaraka amin'ireo trano an-trano izy ireo ary nampiasa azy ireo amin'ny andalana haingana sy mahazatra.
Turhan, Ankara-Eskişehir YHT andalana, raha ny tahan'ny an-trano kosa 55% isan-jato, fotodrafitrasa, superstructure, electrification, signaling ary ny fifandraisan'ny fifandraisan-davitra dia nahatratra 90 isan-jaton'ny haavon'ny isan-tokatrano, hoy izy.
TÜLOMSAŞ ao anatin'ny firafitry ny famokarana prototype mozom-pirenena Hybrid Locomotive dia vita amin'ny famaritana ny Turhan, ny tetikasa dia mety hamokatra lokomotifika vita amin'ny diesel sy bateria satria protoip dia afaka mamokatra firenena fahefatra eto amin'izao tontolo izao hoy izy.
Turhan, ao anatin'ny faritry ny Tetikasa famantarana famantarana nasionaly 622 kilometatra no nanomboka nanao ny fametrahana azy:
Kapsamında Ao anatin'ny ambaratongan'ny Tetikasa nasionaly fiaran-dalamby, manohy ny famokarana ny National Freight Wagon isika, izay efa nieritreritra tanteraka, namboarina ary namboarina niaraka tamin'ny trano an-trano tao TÜDEMSAŞ. Nahatratra 60 isan-jato ny setroka DMU nasionaly novokarina tao amin'ny TÜVASAŞ. Tao anatin'ny faritry ny tetikasa EMU Nasionaly dia nanangana orinasa mpanao famokarana vatana aluminium ao T aluminumVASAŞ izahay. Amin'ny taona ity, mitondra ny EMU nasionaly izahay. Tao anatin'ny faritry ny Tetikasa Nasionaly Nasionaly dia manohy manohy ny fanomezana teknika avo lenta amin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha 94 isika hanohanana ny famokarana nasionaly miaraka amin'ny tetikasan'ny fiaraha-miasa indostrialy. "
Nanazava i Turhan fa nanao ezaka izy ireo mba hampandehanana ny fitaterana rehetra sy ny fidirana amin'ny fotodrafitrasa, ary ny olona sembana 1200 no nandray soa tamin'ny Orinasa Orange Table izay napetraka tamin'ny faran'ny taona lasa.
Sinan İbiş, Filohan'ny Fikambanana Mpizahatany momba ny fizahan-tany, dia nilaza fa mikendry ny hitondra olona manana filàna manokana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana izy ireo ary hampitombo ny fahafantarana ny firenena miaraka amin'ny foto-kevitry ny tetikasan'ny Barrier-Free and Barriers-Free Life izay hosoniavina anio.
Taorian'ny lahateny, ny Tale Jeneralin'ny TCDD Ali İhsan Uygun, ny tale jeneralin'ny TCDD Kamuran Yazıcı sy Sinan İbiş dia nanao sonia ny protocole teo ambany fijerin'ny minisitra Turhan.
Eo an-dàlambe ankehitriny ny tarika Electric Electric
Ny Tram teo an-toerana voalohany dia tonga teny amin'ny làlana
Novokarin'ny Torkia voalohany silkworm Ray an-trano mba mahazo eny ny tram
Ny Tram Cars any Akçaray dia midina amin'ny iray
Ny fiaramanidina elektrônika nasionaly 2018 dia hijanona amin'ny làlambe
Ny ECN loco elektrônika nipetrahan'ny làlana (Video)
Ireo mpamonjy voina 14 voavonjy dia nirodana tamin'ny tontolon'ny lembalemba ao Shina
Ny fiaran-dalamby 2 halefa mandritra ny taona (Photo Gallery)
Konya-Adana High Speed ​​Line dia tonga amin'ny 3 Time
Fiaran-dalamby ambony mankany amin'ny Istanbul-Edirne 1 fotoana (Video)
Ny fiara an-dalamby dia midina mankany an-tanànan'i Bursa
Mankalaza ny Ranomasimbe Indray Ranomasina Mediterane i Eurostar (Video)
Bağcılar-Bakırköy Mandritra ny 13.5 Minutes Coming
Fivarotana tsy misy fepetra
Famokarana sarety am-pirenena
Tale Jeneralin'ny TCDD Transportation